Wednesday,5Dec, 2018 10:07 AM
१९ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु काठमाडौंको खोकना अहिले चर्चामा छ । कारण हो त्यहाँ हजारौं बर्ष पहिलेको बस्तीका प्राचिन अवशेष पाइएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु खोकनालाई बनाउँदा महत्वपूर्ण स्थान नासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । तर नेपाली सेनाले भने खोकनालाई नै दु्रतमार्गको प्रस्थान विन्दु बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । स्थानीबासी र सेनाबीच तनावको स्थिति पैदा भएको छ । खोकनामा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भेटिएपछि इतिहासकार र पुरातत्वविद्हरुको ध्यान आकृष्ट भएको छ । उनीहरुले खोकनाको उत्खनन् गरेर यसको इतिहासलाई केलाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । उनीहरुलले द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दुलाई परिवर्तन गन सुझाव दिएका छन् । खोकनाको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँ भेटिएका प्राचिन बस्तुहरुको निरीक्षण गर्नु भएका इतिहासविद् डाक्टर रमेश ढुंगेलले न्यूज सेवासँगको कुराकानीमा त्यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्ने भन्दै यस्तो तर्क पेश गर्नुभयो ।
खोकनाबासीले प्राचीन कालको इनार स्वाट्टै खनेर निकालेका छन् । विहारका खण्डहरु भेटिएका छन् । मञ्जुश्रीदेखि शिखीबुद्धसम्मको इतिहास छ त्यहाँ । सन्को पहिलो शताब्दीमै त्यहाँ बस्ती भएको प्रारम्भिक अनुमान लगाउन सकिन्छ । ३०० बर्षअघिसम्म त्यहाँ बस्ती थियो कि भन्ने लाग्छ ।
मञ्जुश्रीको थान अहिले पनि छँदैछ त्यहाँ । पुरानो मन्दिर भत्किएर नयाँ बनाएको छ । शिकालीको चौरलाई उत्खनन् नगरी बाटो बनाउनै दिन हुँदैन । पारिपट्टीबाट बाटो लगे पनि हुन्छ नि । पुरातात्विक क्षेत्रलाई नविगार्ने गरी बाटो खन्दा हुँदैन ? सुरुको सर्वेक्षण पारीपट्टीबाट थियो रे । त्यस्तो क्षेत्रलाई मिचेर अघि बढ्न हुन्छ ?
मैले त्यहाँ रहेका इनारहरुलाई हेरें । १६ सय बर्षसम्मको त एसै पनि देखियो । शिखीबुद्धको इतिहास पनि पाइएको छ । त्यसैले त्यहाँ २ हजार बर्षअघि बाटै बस्ती थियो भनेर भन्न सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् । बाटोघाटो, इनार के छैन त्यहाँ ?बस्ती–बस्तीका अवशेष छन् । के कारणले त्यहाँको सभ्यता नष्ट भयो भन्न त अहिले सकिन्न । इन्जिनियरले भन्दैमा हुन्छ । उनीहरुले त बाटो बनाउन जानेका छन् । इनार देखोस कि पुराना इट्टा । ढलान गरेर बाटो बनाउँ भन्छ । हामी त पुरातात्विक चिज बचाउन सिकेका छौ । हामीले त बनाउन पर्यो भन्छौं ।
किरातकालभन्दा पहिलेको सभ्यता
अब शिकाली भनेको शिखिबुद्धको हो । मञ्जुश्रीका थानहरु छन् । ति ‘अर्लि क्रिस्चियन इरा’ भन्दा अडाडिका हुन । त्यहाँ एउटा सभ्यता थियो । काठमाडौंको हाँडीगाउँ जस्तै ऐतिहासिक थलो हो खोकना । अब हाँडीगाउँ, चाँगुनारायणको बीचबाट बाटो लगिदिने ? बागमतीको पारीपट्टीबाट लगे भैगो नि । अब कतिपयले यतापट्टी जग्गा किनिसके । लाखमा किनेर करोडौमा जग्गाबेच्न खोज्नेहरु यसमा लागिपरेका छन् । सरकारका सचिवहरु, प्राविधिकहरु सबैले जग्गा किनेका छन् । प्लटिङ गरेका छन् दुई–तीनसय रोपनी जग्गा। उनीहरुले त्यतैबाट लैजानुपर्छ भनेर जोडबल गरिरहेका छन् । त्यस्तो महत्वपूर्ण इनार फेला परेको छ । त्यसलाई नष्ट गरेर कसरी बाटो लैजान दिने । सभ्यताको खोज गर्नु पर्यो । त्यस्तो ऐतिहासिक थलो भेटिएको छ । हाम्रो लागि त त्यो रोचक स्थान हो । यस्तो बेला झन् सरकारले पुरातत्वका जानकारहरुलाई त्यहाँको बास्तविकता के हो भनेर खोज्न लगाउनु पर्ने हो । त्यो स्थानलाई सुरक्षित गर भन्नु पर्ने हो ।
पाँच सय रोपनी क्षेत्रफल सुरक्षित गर्नुपर्छ
पुरातात्विक उत्खनन् गर्ने हो भने चार–पाँच सय रोपनी क्षेत्रफललाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । शिकालीको डाँडोको छेउछाउदेखि लिएर खोकनाको पच्चिम–दक्षिणपट्टीसम्म जोगाउनुपर्छ । खन्न दिन हुँदैन । अब त त्यहाँ सुत्न जानु पर्ने अवस्था भैसक्यो ।
सयौं घरका जगहरु भेटिएका छन् । महत्वपूर्ण किल्ला, रथ तान्ने सडक, पटाङ्गिनीहरु, विहारका अवशेष भेटिएका छन् । शीप जानेका र ‘पावर’ भएकाहरुले त जे गरे पनि भो नि त्यसो भए ।
किंवदन्ती पुष्टि गर्न सकिन्छ
कतिपय हाम्रा इतिहासहरु किंबदन्तीमा मात्र छन् । तर त्यहाँ रहेका बस्तुहरुलाई हेर्दा त्यो बास्तविक इतिहास हो भन्ने स्पष्ट देखिन थालेको छ । म ञ्जुश्री भनेको हावादारी कुरा हो भन्थे । तर, मञ्जुश्री भन्ने मान्छे हो । बुद्धभन्दा पहिलेको मान्छेलाई बुद्धिष्टभित्र समाहित गरेर मान्यता दिएको मात्र हो । त्यहाँ मञ्जुश्रीसँग सम्बन्धित प्राचिन अवशेषहरु भेटिएका छन् । खोकनाका मान्छेहरु आँफै चारहजार बर्षभन्दा अघिका मान्छेजस्ता देखिन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको राम्रो चित्र
खोकना हाँडीगाउँ, चाँगुनारायण, विशालनगर, देउपाटन जस्तै ठाउँ हो । अब यि पुराना सभ्यतामा घरका जंगल बनिसक्यो । यहाँ उत्खनन् गरेर विगतका सबै इतिहास पल्टाउन पनि गाह्रो छ । त्यहाँ त खाली खेतहरु छन् । खोज्न निकै सजिलो छ । त्यसलाई त जोगाउन पर्यो । त्यसले प्राचिनतम मानिसको सभ्यताको जानकारी दिन्छ । देशको लागि गौरब गर्ने ठाउँ हुन्छ । बाहिरको मान्छेहरु आएर लाइन लागेर हेर्ने छन् । अहिले ३ हजार बर्ष पहिलाको सभ्यता पाइयो भने सानो कुरा हो त्यो ? काठमाडौं उपत्यकामा बस्तीको विस्तार कसरी भयो ? कति पुरानो ठाउँ हो यो भन्ने चित्र खोकनामा पाइने छ ।
सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्छ
सरकारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ । कहिले–काँही चेतना नभएर, बुझाइमा कमजोरी भएर पनि
त्यस्तो गरिएको हुन सक्छ । हामीलाई पनि मन्त्रालयले सल्लाहाकारको रुपमा राखेको छ । हामी त्यहाँका जागिरदार त होइनौ तर विज्ञ समुहमा त मलाई पनि राखेका छन् । हामीले लागेको कुरा भन्ने हो । सरकारको काम भनेको विकास निर्माण गर्ने हो । तर विकास निर्माण गर्ने भन्दैमा संस्कृति मास्न त भएन । त्यहाँका जनता सजग भए । हाम्रो पुरातात्विक चिज जान्छ भन्ने भयो । स्थानीय आँफैले खनेर कतिपय कुराहरु निकालिसके । यतिबेला त त्यो ठाउँलाई पुरातत्व विभागले कब्जा गरिसक्नु पथ्र्यो । त्यत्रो इनार खनेको पुरातत्वका मान्छेले हो र ? त्यहीका मान्छेले हो । स्थानीयहरुलाई त्यहाँ बाटो आओस् भन्ने चाहना छैन । उनीहरुले खोचे थाप्न गरेको हो भने पनि अब त त्यहाँ प्राचिन कुरा त देखिइसक्यो । यसलाई बेवास्ता गर्न भएन । सरकारले व्यापक अध्ययन गराइ दिन पर्यो । यो प्राचिन स्मारकलाई भत्काएर लैजाने कुरा आउँदैन । अब डोजर लगाएर भत्काउन खोजिन्छ भने म त त्यहाँ गएर सुत्न तयार छु ।